माघ ५ गरे शनिवार पछि मात्रै शनि उदाउने ! यी ५ राशिलाई लाभ मात्र नभई हुनेछ राहत ! « Onlinetvnepal.com
माघ ५ गरे शनिवार पछि मात्रै शनि उदाउने ! यी ५ राशिलाई लाभ मात्र नभई हुनेछ राहत !
Published : 11 January, 2019 6:36 pm
ग्रहहरु मध्ये शनि ग्रहलाई क्रुर ग्रह मान्ने गरिन्छ। शनिलाई न्यायाधिपति पनि भन्ने गरिन्छ। शनिको साढेसाती र ढैयाको चल्दा विभिन्न राशिहरुलाई दुख मिल्ने गर्छ। जसको कारण दैनिकी जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ।
शनि मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी शनिवार मंसिर २९ गते शनि अस्त भएको हो। मङ्सिर महिनाको अन्तिम दिन बिहानको ५ बजेर ०४ मिनेट देखि शनि अस्त हुँदा त्यस दिन देखि कुण्डलीमा शनिको महादशा चलिरहेकाहरुलाई लाभ मिल्न सक्छ।
शनि अस्त हुनाले शनि प्रकोपको कारण दुख भोगी रहेकाहरुलाई राहत मिल्ने मात्र नभई धेरै प्रकारका लाभ मिल्छ। यस दिन अस्त भएको शनि माघ ५ गरे शनिवार उदाउनेछ।
शनि धनु राशिमा चलिरहेको हुँदा वृश्चिक, धनु र मकर राशिमा साढेसाती चल्ने गर्छ। वृश्चिक राशिमा अन्तिम चरणको , धनुमा दोस्रो चरणको, मकरमा पहिलो चरणको साढेसाती चाल्नाले यी राशिलाई दुख मिलिरहेको हुन सक्छ । यस्तै वृष र कन्या राशि माथि शनिको लघु कल्याणी ढैया चल्दा यी दुई राशिलाई पनि असर परेको हुन सक्छ । तर शनि अस्त भएसँगै यी राशिहरुलाई राहत मिल्छ।
यी ५ राशिलाई निम्न प्रकारका लाभ मिल्नेछ।
रोकिएको कार्य शुचारु हुनेछ। -स्वास्थ्यमा रहेका समस्या देखि छुटकारा मिल्न सक्ला। -बिग्रिएका सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। -कानुनी रुपमा रहेका समस्यामा पनि सफलता मिल्नेछ। -आर्थिक रुपमा आमदानी बढ्नेछ।
प्रकाश सपुतसंग शम्भु राईको डिमाण्ड ! अब म छोडदिन, ठुलो दुर्घटना हुन्छ …..(भिडियो सहित)
नेपालको सांगीतिक बजार यतिबेला ‘गलबन्दीमय’ छ । प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारको आवाजमा समावेश
रबि लामिछानेसंग माफी माग्दै आए ज्ञानेन्द्र शाही ! रिसले आगो भए ज्ञानेन्द्र ,”म माथि नै आक्रमण”….(भिडियो सहित)
भ्रष्टाचार विरोधी चर्चित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले आँफु अन्यायमा परेको बताएका छन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमका
रबिलाइ माफी माग्दै आए ज्ञानेन्द्र|तथानाम गालिगर्ने अनिल ब्यक्तिबारे गरे सनसनिपुर्ण खुलासा…..(भिडियो सहित)
मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भ्रस्टचारी भनेका राम प्रसाद चौलागाई अन्तत आए मिडियामा, सार्बजनिक गरे मेयरसंगको गोप्य फोन मेसेज (पुरा भिडियो)
यति बेला इटहरीका मेयर द्धारिकालाल चौधरी चर्चाको शिखरमा छन । उनले आफु माथि लागेको आरोपको
OMG: माइतीघर मण्डलामा लाखौं जनता उर्लियो, अब छोडदैनौ ! सातो उड्ने गरी गर्जिए…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाण्डौ – चर्को दबाबपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि काठमाण्डौमा विभिन्न माग राख्दै गुठी
OMG: माइतीघर मण्डलामा लाखौं जनता उर्लियो, अब छोडदैनौ !
प्रकाश सपुतसंग शम्भु राईको डिमाण्ड ! अब म छोडदिन,
रबि लामिछानेसंग माफी माग्दै आए ज्ञानेन्द्र शाही ! रिसले
रबिलाइ माफी माग्दै आए ज्ञानेन्द्र|तथानाम गालिगर्ने अनिल ब्यक्तिबारे गरे